बेला-बेलामा टाउको फुट्ने गरी दुख्छ भने यस्ता कुरा अपनाउनुहोस ।(बिधि सहित) – yuwa Awaj
काठमाडौँ : मानिसमा टाउको दुख्ने समस्या विभिन्न कारणले हुन्छ । चिसोको मौसममा त धेरै मानिसलाई टाउको दुख्ने समस्याले सताउने गर्छ । टाउको दुखाईका कारणहरु र प्रकारहरु विभिन्न हुने गर्दछ ।
आधा टाउको दुख्ने, बेलाबेलामा एकाएक अत्यधिक टाउको दुख्ने, रींगटा लाग्ने, वाक–वाक लागे जस्तो हुने, वान्ता हुने, घाम, भिडभाड तथा आवाज आउने ठाउ“मा जादा सहन नसक्ने लक्ष्ँणहरु माइग्रेन हुनसक्छ । टाउको दुख्ने तथा रिस उठ्ने जस्तो लक्षणहरु देखापर्छ ।
यदि यस्तो छ भने यो माइग्रेनको लक्षण हो, त्यसैले यसलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ । यदि नियमित रुपमा यस्ता प्रकारले टाउको दुखिरहेको छ भने निम्न बिषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ–
१. सकेसम्म कहिल्यै भोको पेट बस्नु हुँदैन । पानी तथा फलफूल प्रशस्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ ।२. आफू बसेको स्थान आसपासमा दुर्गन्ध वा बास्ना आउने वातावरण छ भने अन्यत्र जानुपर्छ ।३. अत्याधिक चम्किलो उज्यालो, भिडभाड तथा आवाज आउने ठाउबाट टाढा रहनुपर्छ ।४. गुन्द्रुक, सिन्की, तामा तथा बोतलको पुरानो अचार खानु हुँदैन ।
५. दही, मही, पनिर, आइसक्रिम, कफी चकलेटको सेवन गर्नु हुँदैन ।६. कोक, बियर, रक्सी, वाइन (बन्द बोतल पेय पदार्थ) को सकेसम्म सेवन नगर्ने ।७. अनावश्यक रुपमा चिन्ता लिने, वा एकोहोरो भएर बस्नु हुदैन । सकेसम्म एक्लै नबस्ने ।८. दैनिक न्यूनतम ८ घन्टा पुर्ण आरामका साथ सुत्ने गर्नुपर्दछ ।
भुलेर पनि नखानुहोस् यस्ता भाँडामा यी खानेकुरा, स्वास्थ्यका लागि अतिनै हानिकारक हुन्छ ।
नेपाली समाजमा तामाको भाडा निकै महत्वपुर्ण र प्रचलित रहेको पाइन्छ। धार्मिक एवम् वैज्ञानिक रूपमा समेत यसको महत्व निकै रहेको छ।तामाको भाँडाको प्रयोग कुनै नौलो कुरा होइन तर यसलाई प्रयोग गर्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ किनभने केही खानेकुरा यसमा राख्दा तामामा केमिकल रियाक्सन हुन्छ जुन शरिरका लागि निकै घातक पनि हुनसक्छ ।
अचार, दही र कागतीको रसः तामाको भाँडामा अचार राख्दा यसमा भएको नुनिलो पानी तामासँग मिल्छ । यसले फुड पोइजनिङ पनि हुनसक्छ । यस्तै, कागतीको रसमा भएको एसिड तामासँग मिलेर रियाक्ट हुन्छ । यसले एसिडिटी वा पेट दुखाईजस्तो समस्या हुनसक्छ । यसबाहेक दहीमा भएको तत्व पनि तामासँग मिसेर रियाक्ट हुन्छ जसले फुड पोइजनिङको खतरा बढ्न सक्छ ।
अमिलो फल र दुधः तामाको भाँडामा जुनसुकै अमिलो फल राख्दा फुड पोइजनिङको खतरा बढ्ने गर्छ । स्याउ, अनार, अम्बा, मेवाजस्ता फल तामाको भाँडामा बिर्सेर पनि नराख्नुहोस् । यस्ता फल खाँदा बान्ता हुने, रिंगटा लाग्नेजस्तो समस्या निम्तिन सक्छ । तातो होस् वा चिसो दुध पनि तामाको भाँडामा राख्नुहुँदैन । यसले पनि स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने गर्छ ।
Prevअमेरिकी चुनावमा २ नेपाली अमेरिकनमध्ये ढकाल ४८३९ मतले विजयी, गुरुङले ल्याइन् २९८५ मत…पूरा पढ्नुहोस् ।
Nextसिस्नोको सेवनले मुटु र मृगौला सम्मको रोगहरुलाई फाइदाजनक…हेर्नुहोस् ।(प्रयोग गर्ने बिधि सहित)